Anisan'ireny i Beyonce sy Jay Zee, manana roa taona lany ho an'ny roa tonta, vola ampy ho an'ny trano lehibe. Vao haingana, miaraka amin'ny tànan'ny mpihira, ny kolontsaina iray momba ny fanambadiana dia novolena tamin'ny fiangonana iray!
Tempoly fahiny na tsy fifanarahana tsy nampoizina
Ny fampahalalam-baovao tandrefana dia nitatitra ny anaran'ny tompon'ny fiangonana katolika ao amin'ny Tranon'Andriamanitra ao amin'ny The Big Easy any Nouvelle-Orléans, Louisiana, izay nokaramaina nandritra ny taona vitsy lasa izay, tao anatin'ny rindrina izay tsy natao nandritra ny fotoana lava be, ary ny pelaka dia samy lehilahy. Ity Beyonce 36 taona ity, izay nantsoina hoe mpanjakavavin'ny mozika pop hatramin'izay!
Ilay mpihira malaza R'n'B ho an'ny tempoly, izay manana tantara maherin'ny zato taona, dia nandoa $ 850.000. Ny tranobe, izay misy kianja 700 metatra toradro, dia vita vato.
Atsangano ny rindrin'ny fiainana
Ny tetik'asa momba ny fanararaotana ny toeram-ponenana misy mpivaro-tena iray manan-janaka telo dia tsy fantatra. Araka ny nolazain'ny mpitsikilo, Beyonce sy Jay Z, izay mora nahamarika tranobe iray nilaozan'ny tranobe iray, dia samy manana fikasana tanteraka.
Tranon'Andriamanitra ao amin'ny The Big Easy
Ilay mpihira sy rapper, izay miaramilan'ny mpanaraka - olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao, dia hamerina indray ny paroasy, izay hanokatra indray ny varavarana ho an'ireo mpiangona. Tsy misy isalasalana fa ny sampana ao amin'ny fiangonan'i Beyoncé dia hanangona ireo nividy ireo, anisan'ireo mpankafy mpankasitraka an'ilay mpanakanto.
Justin Bieber dia nitsidika ny efitra fandroana vehivavy ary nivadika ho blondy sexy
Farany, tamin'ny faran'ny volana Aprily tany amin'ny Katedraly Grace, miorina ao San Francisco, Kalifornia, ny Monk Yolanda Norton dia nanao litorzia natokana ho an'i Beyonce. Raha tokony ho an'ireo olona dimampolo ireo, dia olona 900 no nanatrika ny tolotra. Noho izany dia azo antoka ny fientanam-po avy amin'ny tempolin'ny mpihira!
Tsy te hanao fihainoana haino aman-jery i Sting
Zein Malik nanambara ny fihetseham-pony
Nandao ny trano i Gigi Hadid raha tsy nisy akanjo
Sandra Bullock ao amin'ny Oscar 2018: Sary mampientam-po sy trolling Nicole Kidman
Nitsidika ny sarimihetsika Star Wars ny Prints Harry sy i William
Irina Sheik, izay bevohoka, ao amin'ny lahatsary mahatsikaiky momba ny "Love"
Nisy mpankasitraka an'i Britney Spears nanafina azy nandritra ny fampisehoana
Emma Watson dia rava tamin'ny sipa William Knight
Miranda Kerr naka sary an-keriny tao an-davarin'ny penthouse
Nivoaka niaraka tamin'ny sipa vaovao i Kate Hudson
Fanatanjahana eo amin'ny biceps
Ororo volamena miaraka amin'ny kristaly Swarovski
Antoko amin'ny fomba "Alice in Wonderland"
Aretina amin'ny hentitra - Aretina
Mofomamy avy amin'ny paoma japoney
Asidra Amber amin'ny fatiantoka
Ahoana ny fomba hanadiovana ny vatana amin'ny orona?
Fialantsasatra any Nouvelle Zélande
Ahoana no hisafidianana rakitra ho an'ny efitrano fandriana?
Ahoana no ahafahan'ny vehivavy mahazo orgasme?
Ahoana no hanamboarana zizus?
Javier Bardem dia nidina nankany amin'ny 300 metatra tany Antarctique